स्वास्थ्य पेजलकडाउन गर्दापनि संक्रमण नियन्त्रणमा नआउनुको कारण खुलाउँदै डाक्टर भन्छन् –‘समुदायमा फैलिसकेको थियो, ढिला भयो ।’ - स्वास्थ्य पेज लकडाउन गर्दापनि संक्रमण नियन्त्रणमा नआउनुको कारण खुलाउँदै डाक्टर भन्छन् –‘समुदायमा फैलिसकेको थियो, ढिला भयो ।’ - स्वास्थ्य पेज
लकडाउन गर्दापनि संक्रमण नियन्त्रणमा नआउनुको कारण खुलाउँदै डाक्टर भन्छन् –‘समुदायमा फैलिसकेको थियो, ढिला भयो ।’
नेपालगन्जः नेपालगन्ज भेरी अस्पताल नेपालगन्जको पीसीआर प्रयोगशालामा पछिल्लो २४ घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये ७४ दशमलव ३ प्रतिशतमा भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो ।
त्यसको अघिल्लो दिन ३६ घण्टाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा ८० प्रतिशतबढीलाई भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ९० प्रतिशत बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका छन् ।
भाइरस संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न नेपालगन्जमा लकडाउन गरिएको डेढ साता वित्नै लाग्दा समेत संक्रमितको संख्या किन यसरी बढिरहेको हो ? संक्रमणको रेसियो दर घट्नु पर्ने होइन र ? भेरी अस्पताल नेपालगन्जका फिजिसियन डा.खगेन्द्र जंग शाहले समुदाय स्तरमा फैलिएका कारण संक्रमणको दर घट्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
समुदायस्तरमै भाइरस संक्रमण फैलिसकेकाले अहिलेको मुभमेन्टसँग यसको सरोकार नभएको उहाँको तर्क छ । भाइरस संक्रमणको चेन बेक्र गर्न गरिएको लकडाउन निकै ढिला भएको उहाँको भनाइ छ । प्रशासनले मानिसको मुभमेन्ट रोक्न लकडाउन गर्यो तर लकडाउन गर्नुभन्दा पहिले नै घरघरमा भाइरस पुगिसकेको थियो कसरी संक्रमण दर घट्छ ?
अहिले समुदायका हरेकलाई संक्रमण भएको हुन सक्ने भन्दै डा.शाहले अवस्था थप जटिल र भयावह बनेको संकेत गर्नुभयो । मुभमेन्ट पूर्णरुपमा अझै नरोकिएको भन्दै शाहले स्वम् व्यक्ति संवेदनशिल नभएसम्म माहामारी जित्न नसकिने बताउँनहुन्छ ।
अस्पतालमा ओपीडी बन्द भएपनि फिवर क्लिनिकमा अधिकांश बिरामीहरु आउने र त्यही आएकाहरु धेरैमा संक्रमण देखिने गरेको उहाँले बताउँनुभयो ।
संक्रमण दरसँगै मृत्युदर समेत निरन्तर उकालो लागिरहेको प्रशंग निकाल्दै डा.शाहले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरुले अक्सिजन लेभल चेक नगर्ने, ज्वरोमा मात्र ध्यान दिने गरेको देखिएकाले निरन्तर अक्सिजन लेभल जाँच गरिरहन र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा बस्न आग्रह गर्नुहुन्छ ।